Tuuniisiya oo baadi goobaysa dad la tuhunsan yahay - BBC Somali
Tuuniisiya oo baadi goobaysa dad la tuhunsan yahay
1 Luulyo 2015
Image caption Ciidammada Tuunis oo baaritaan ku wada weerrarkii Sousse
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Tuuniisiya ayaa baaritaanka ay ku waddo weerrarkii magaalada Sousse waxa ay ku baadi goobaysaa laba qof oo laga shakisan yahay.
Qoraalka wargelinta ayaa waxaa lagu daabacay bogga ay Facebook-ga ku leedahay wasaaradda arrimaha gudaha, hasayeeshee halkaasi kuma cadda sababta loo baadi goobayo.
BBCda ayaa loo sheegay in dadkaasi ay xiriir la lahaayeen ninkii hubeysnaa ee 38 qof ku dilay xeebta Sousse.
Inta badan dadka ay dhibaatadu soo gaartay waxa ay u dhasheen Britain.
Ilo booliska ka tirsan ayaa BBCda u sheegay in labada qof ee magacyadoda lagu sheegay bogga Facebook-ga ee wasaaradda arrimaha gudaha ay saaxiibbo la ahaayeen ninkii toogashada ku dilay tiro dalxiiseyaal ah todobaadkii hore.
Wasaaradda arrimaha gudaha waxay magac dhawday oo soo galisay masawirrada Mohammed Al Sharadi oo arday ka ah Bizerte oo ku taalla waqooyiga Tunisia iyo Rafique Al Tayari oo ah 28 jir ka soo jeeda magaalada caasimadda ah ee Tunis.
BBC ayaa loo sheegay in dadkaasi loo doonayo in su'aalo la weydiiyo.
Sidaasoo ay tahayna warbixinno ka imaanaya saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegaya in ninkii dableyda ahaa ee ka dambeeyey weerarkii lagu le'day ee Sousse ay u badan tahay inuu tababar ku soo qaatay Libya.
Saraakiisha Tunisia waxay kaloo xaqiijiyeen xarigga koox dad ah o ay rumaysan yihiin in ay xiriir la leeyihiin weerarkaas lagu dhintay, lamase oga dadkaas kuwa ay yihiin.
Xukuumadda ayaa lagu dhaliilay qaar ka mid ah guuldarrooyin xagga amniga iyo sirdoonka ah.
Bishii Maarso ayaa koox dabley ah waxay gudaha u galeen matxafka Bardo ee magaalada caasimadda ee Tunis, halkaasoo ay ku dileen 22 dalxiisayaal ajaanib ah.
Dhaqaalaha Tunisia ayaa badi ku tiirsan dalxiiska.
Dad badan ayaa walaac ka qaba dalxiiska oo hoos u sii dhacay, taasoo ay ugu wacan tahay welwel laga qabo ammaanka.